Maleeshiyada kurdida oo aqbalay dalab kaga yimid Dowlada Turkiga | Universal Somali TV
Maleeshiyada kurdida oo aqbalay dalab kaga yimid Dowlada Turkiga
Sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyada kurdida Suuriya ayaa sheegay in ciidankooda uu isaga bixi doono deegaanada ay ka joogan xadka Turkiga, kadib markii la isku afgartay wada xaajood uu Mareykanka garwadeen ka Noqday.
Balse dagaalyahanada ayaa ku sii sugnaan doona magaalooyinka kale ee ku yaal waqooyiga bari ee gobolka Idlib.
Reydul Khaliil oo ah sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyadan ayaa xaqiijiyay in galabnimada maanta oo axad ah ay isaga bixi doonaan magaalada Raas Al- Ceyn, hadii dib u dhac kale uu Imaan.
Maleeshiyada SDF iyo dagaalyahanada kurdida ee YPG ayaa turkiga uu ku daray diiwaanka kooxaha Argagixisada ayna qabad ku yihiin amaanka qaranka Turkiga.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Ankara ku heshiiyay xabad joojin soconeysa mudo shan maalin ah, si dagaalyahanada Kurdida ay isaga baxaan deegaanada ay hada Joogaa.
Sida ku xusan heshiiska Turkiga ayaa 120 saac siiyay in kurdida ay faarujiyaan aagaga hore ee dagaalka, si loo hirgaliyo aag ka nabdoon colaada oo qaxootiga suuriya ee ku sugan Turkiga ay dib ugu laaban Karaan.
Kan-xigaRuushka iyo Turkiga oo ka tashanaya s...
Kan-horeAskar ku dhimatay dagaal u dhaxeeya m...
54,067,425 unique visits